Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Amadeus fifanarahana vaovao miaraka amin'ny Sunway Hotels & Resorts
20200827 2901202 1 a
Amadeus, mpamatsy indostrialy vahaolana amin'ny teknolojia fandraisam-bahiny, dia nanambara fifanarahana vaovao miaraka amin'ny Sunway Hotels & Resorts, iray amin'ireo Asia ny vondrona hotely iraisam-pirenena malaza indrindra, hanome vahaolana teknolojia feno hahafahan'izy ireo mandrindra ny famandrihan-toerana sy ny programa tsy fivadihana manerana ny fananana mahaleo tena 11 an'ny Sunway ao Malezia, Kambodza, ary i Vietnam, ary koa ny fivoarana ho avy izay ahitana hotely vaovao ao Malezia fanjakana atsimo an'ny Johor, kasaina hanombohana amin'ny 2021.
Ao anatin'ny fifanarahana mandritra ny 3 taona dia hametraka ny Amadeus 'iHotelier® Central Reservation System, Guest Management Solutions, ary vahaolana momba ny fitantanana tranokala amin'ny dingana samihafa ny vondrona hotely. Ireto vokatra ireto dia hanambatra sy handamina angon-drakitra manan-danja sy ny angon-drakitra ary koa hanome fomba fijery azo zahana. Ity dia hetsika ara-potoana, satria ny fomba fitarihana data amin'ny fahazoana ny vahiny sy ny fitazonana no zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay - araka ny fikarohana nataon'ny Amadeus farany teo. 76% ny mpitarika ny indostrian'ny fandraisam-bahiny manerantany dia mikasa ny hikendry mpihaino vaovao hanonitra ny vola azo avy amin'ny fifangaroan'ny orinasa mahazatra, miaraka amin'ny fizarana 75% fa ny angon-drakitra mandroso dia manakiana ny fanatanterahana ny drafitra fanarenana azy ireo amin'ny sehatra COVID-19.
“Amin'ny maha hotely mahaleo tena azy dia mety ho fanamby ny mifaninana amin'ireo fananana manana marika lehibe kokoa izay manana fidirana amin'ny loharanon-karena bebe kokoa, ao anatin'izany ny fanolorana teknolojia manara-penitra. Amin'ny fampiharana ny vahaolana Amadeus amin'ny orinasantsika, azontsika atao ny mampihatra ny haitao izay mifanaraka indrindra amin'ny fizotranay. Ity dia mampihena ny vidin'ny asa aman-draharahantsika amin'ny fidirana amin'ny fahafaha-manao izay ilainay mba hanaterana fanomezana marobe ho an'ireo vahininay, ” hoy i Dato 'Tan Kia Loke, Talen'ny fitantanana zokiolona ao amin'ny Sunway Group ho an'ny biraon'ny filoha.
Ny vahaolana fandraisam-bahiny nataon'i Amadeus dia ahafahan'ny vondrona manolotra serivisy tena manokana ho an'ireo vahininy. Dato 'KL Tan foana: “Amin'ny maha vondrona hotely misy efitrano fandraisam-bahiny sy villa mihoatra ny 3,300 manerana ny portfolio isan-karazany, izay manomboka eo fialantsasatra ara-pahasalamana mirary trano miaraka amin'ireo villa tsy miankina amin'ny trano misy kintana 3 miaraka amin'ny trano fivorian'ny fivoriambe, ny filàna sy ny fitakian'ny vahiny dia samy hafa be amin'ny tany rehetra. Amin'ny fanamafisana ny angon-drakitra rehetra ataon'ny mpitsidika sy ny fanomezana fiheverana sarobidy momba ny mombamomba ny mpitsidika tsirairay, ny vahaolana dia ahafahantsika mamorona traikefa manokana sy tsy hay hadinoina, izay hanampy amin'ny fampitomboana ny fahamaroan'ny vahiny miverina. ”
Amin'ny alàlan'ny System Reservation Central an'ny Amadeus, Sunway Hotels & Resorts dia afaka mandamina ny portfolio, ny tahan'ny ary ny lisitra ao anaty sehatra afovoany, manome ny fahaiza-manao fototra ilaina amin'ny fitantanana ny fizarana hotely sy ny varotra. Ny endriny azo refesina dia mamela ny hotely tsirairay hanamboatra ny sehatra arak'izay ilain'ny tsirairay. Ho fanampin'izany, ny fomba voalohany API dia manampy amin'ny fampihenana ny fanaintainan'ny fifindra-monina lafo, hanamora ny fampidiran'ireo fananana isan-karazany manerana ny vondrona ireo teknolojia vaovao ireo.
Mandritra izany fotoana izany, ny vahaolana vahaolana momba ny fitantanana ny vahin'i Amadeus dia hanome ny Sunway Hotels & Resorts topimaso 360-degre momba ny mombamomba ny mpitsidika azy ireo amin'ny alàlan'ny fomba fijery mivaingana sy mitambatra momba ny tahiry ho an'ny vahiny. Ity fomba fijery ity dia ahafahan'ny trano fandraisam-bahiny manavaka ny lafiny tsirairay amin'ny fitsangatsanganan'ny vahiny sy hahitana fotoana bebe kokoa. Ohatra, ny trano fandraisam-bahiny iray dia afaka mikendry ireo vahiny manana fifandraisana mahomby sy ampanjifaina mba hanomezana tolotra manokana na fanavaozana. Azon'izy ireo atao ihany koa ny manome soso-kevitra amin'ireo zotra fitetezana eo an-toerana mba hanomezana traikefa tsy manam-paharoa. Amin'ny farany, ity haavo manatsara ny maha-izy azy ity dia afaka manampy amin'ny paikady fivarotana sy fivadihana.
“Faly izahay miara-miasa amin'ny iray amin'ireo Asia ny mitarika vondron'olona mandray vahiny, ary manantena ny ho anisan'ny drafitra fitomboany manerana ny faritra, ” nanao hoe: Maria Taylor, Lehiben'ny varotra, Asia Pacific, Hampiantrano, Amadeus. “Ny vahaolana Nimble dia tsy zava-dehibe loatra hanampiana ireo hotely APAC hiaina sy hiroborobo. Amin'ny maha-mpamatsy haitao fitetezam-paritany mitam-piadiana manana dian-tongotra be dia be ao amin'io faritra io, dia napetraka tsara izahay hanohana io fanitarana io. Manome vahaolana mailaka sy mitarika indostrialy izahay mba hahafahan'ny orinasa mandray vahiny mandray fanapahan-kevitra avy amin'ny angon-drakitra izay manampy amin'ny fitakiana fitadiavana tombony, hanatsara ny fahombiazan'ny asa ary hampitombo ny tsy fivadihana. ”
Sunway Hotels & Resorts dia miasa hotely sy hotely 11 ao Malezia, Kambodza ary i Vietnam, maneho ny fanangonana efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandraisam-bahiny 3,300 mahery.